Dombo jena - Iyo nyeredzi chigadzirwa cheimba yako | Bezzia
Susana godoy | 13/01/2022 14:00 | Musha
Unoziva dombo jena here? Chokwadi makanzwa nezvazvo, nekuti chinhu chakakosha pamusha wedu. Asi kunyangwe ukasazvitenda, kana waziva mabhenefiti ayo ese, unozoenda nazvo kana usati watova nazvo. Dzimwe nguva ichokwadi kuti isu tinotarisa chaiwo zvigadzirwa kune yega yega nzvimbo. Asi, iwe ungafungei nezvekuva nezvose mune imwe?
Icho chinhu icho Zvaizotiponesa tiri vaviri munzvimbo kumba uye mundima yehupfumi. Saka, isu tinogona ikozvino kutanga kuwana zvese zvakanakira izvo dombo jena rine uye kuti rinogona kushandiswa sei kubatsira zvakanyanya kubva pariri. Isu tinokuudza zvese kuti usarase ruzivo!
1 Chii chinogona kucheneswa nedombo jena
2 Kuti dombo jena rinoshandiswa sei
3 Ichi chigadzirwa chekuchenesa chinogadzirwa nei?
4 Kubatsira kukuru kwebwe
Chii chinogona kucheneswa nedombo jena
Pano isu tingada, takada kuzvibvunza isu mubvunzo wakapesana: Chii icho chisingagone kucheneswa nedombo jena? Nekuti chokwadi ndechekuti kana tikafunga nezvekuchenesa imba yedu, rudzi urwu rwechigadzirwa chemusikirwo runogona kushandiswa pahuwandu hwenzvimbo. Nokudaro, zvose mapurasitiki uye enamel kana simbi isina tsvina inogona kucheneswa nayo. Asi zvakare, Ichave yakakwana kune sirivha, mhangura uye kunyange makristasi. Mukuwedzera, mukicheni tinogona kuchenesa zvose sink uye ceramic hob uye marble kana granite.. Yakakwanawo kudzimba dzekugezera nemapombi, pamwe nekubvisa mavanga emarara. Saka usatya kuishandisa, kunyanya munzvimbo dziya dziya dziya dzinokwanisa kudzidzivisa.
Kuti dombo jena rinoshandiswa sei
Ichokwadi kuti pachave nesarudzo dzakati wandei, asi mamwe eakanyanya kukosha anowanzo kuuya nesiponji kufambisa kuchenesa. Isu tinofanirwa kunyorovesa chipanje ichi nekuchibvisa zvakanaka. Zvadaro, tichapfuura nepakati pedombo jena uye ipapo pamusoro pepamusoro kuti irapwe. Sezvo mutemo wega wega, hazvizove zvakafanira kuve nekukwesha zvakanyanya. Paunenge wanyatsoisa pamuviri, bvisa nemucheka wakanyorova kusvikira pasina zororo rechigadzirwa. Kuti uwane kupenya kwakakosha, tora jira rakachena uye rakaoma, kuti upfuure zvakare munzvimbo yatakachenesa. Iwe uchaona kuti zvinotaridzika sei kupenya uye pasina kuita basa rakakura sezvatakareva. Zvakare, rangarira kuti haudi chigadzirwa chakawandisa kuti uone mibairo yakanaka. Nemari shoma chete uchaiwana. Izvi zvinoita kuti igare kwenguva refu kupfuura zvaunofungidzira.
Ichi chigadzirwa chekuchenesa chinogadzirwa nei?
Tinotaura nezvedombo sechinhu chinenge chishamiso. Nokuda kwechikonzero ichi, tinogona kugara tichifunga kuti imwe mhando yezvigadzirwa yakavanzwa pakati pezvigadzirwa zvayo, ngatitaurire zvakakosha, uye hapana chinowedzera kubva kune chokwadi. Nekuti kana iwe uchida kuziva kuti inoumbwa nei, isu tichakuudza izvozvo mariri uchawana ivhu jena pamwe chete nemvura nesipo, uchipfuura nemumuriwo glycerin uye sodium carbonate. Hapana chimwe chinhu chaunoda kuti ubve pamba kunze kwekuchena. Iyo zvakare inorwisa mabhakitiriya, saka kuchenesa kwakatodzika kupfuura zvatingafungidzira. Iyo haina chero mhando yehupfu, saka haizotsamwisa ganda zvakare.
Kubatsira kukuru kwebwe
Chokwadi tanga tichidzitaura zvishoma nezvishoma. Imwe yemabhenefiti akanyanya kukosha ndeyekuti tinokwanisa kuchenesa zvese zvemba yedu nazvo. Haikweshe kana kusiya mavara kana tikageza zvakanaka uye ndezvekuti mukuwedzera, kupenya kuchaonekwa kunenge nemashiripiti. Inotora nguva yakareba uye mutengo wayo wakadzikira kune ese mabhenefiti ayo akatichengetera. Inoshanda zvakanyanya nemavara akaomarara, ichisiya imba yako yakachena kwenguva refu. Pamusoro pezvo, mamwe acho ane hwema hweremoni unozopinda mumba mako nekunzwa kwakachena. Wamboedza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Dombo jena: Chigadzirwa chenyeredzi cheimba yako